पर्याप्त पानी पिउनुहुन्न भने कसरी स्वस्थ बन्नुहुन्छ ? एक स्वस्थ मानिसले दैनिक कति पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ ? - ज्ञानविज्ञान
एक स्वस्थ मानिसले दैनिक कति पानी पिउनु पर्दछ ? सामान्य त स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रतिदिन २.५ लिटर पानी छिर्छ र त्यति नै पानी बाहिर निस्कने गर्दछ भन्ने मान्यता छ । खाएर होस या भित्र नै बनेर होस् ।
शरिरका लागि पानी नभइ नहुने पदार्थ हो भनिराख्न पर्दैन । यो प्राय सबैलाई थाहा हुन्छ तर पनि मानिस पानी पिउँने बानी गर्दैनन् । हामीलाई भन्नु छ, पानी नै पिउनुहुन्न भने कसरी स्वस्थ बन्नुहुन्छ ? एक स्वस्थ मानिसले दैनिक कति पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ ?
Don't Miss it पेट सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचार ! शेयर गर्नुहोस्, कसैलाई काम लाग्न सक्छ ।